१६३०.६७ विन्दुमा नेप्से, १ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री (१ बजेको अपडेट )
कात्तिक १२, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक कारोबार भएको दुई घण्टाको अवधिमा २४ दशमलव ४२ अंक बढेर १ हजार ६३० दशमलव ६७ विन्दुमा पुगेको छ । उक्त अवधिमा १७६ ओटा कम्पनीको रू. १ अर्ब ११ करोड ७६ लाखभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
नेपाल फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ६२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने सर्वाधिक कारोबार ग्लोबल आइएमई बैंकको भएको छ । बैंकको रू. ११ करोड १३ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १२ ओटा समुहमध्ये जलविद्युत् कम्पनीको परिसूचक शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत, निर्जीबन बीमा समुहको शून्य दशमलव १ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समुहको शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत घटेको छ भने बाँकी समुहको परिसूचक बढेको छ ।
सबैभन्दा बढी बैंकिङ समुहको परिसूचक ३ दशमलव शून्य २ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उक्त अवधिमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको शेयर मूल्य बढेको छ । वाणिज्य बैंकले लाभांश प्रस्ताव गर्न लागेसँगै लगानीकर्ताको आर्कषण बढेको देखिन्छ ।